2 Ithiphu # 2: Yiba ne-tezaurus Spremni futhi Thatha Creative!
3 Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama-glagoli, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene nawe kanye nokuqukethwe kwakho
3.1 Razina I-razine yePro: Ukusebenzisa i-Made-up Riječ noma Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
Igama lebhulogi yakho kufanele lihlotshaniswe nohlobo lokuqukethwe okwenzayo. Cabanga ukuthi unomlando obizwa ngokuthi “i-Foodie kutak” kodwa okuqukethwe kwakho konke okuphathelene nokubuyekezwa kwemikhiqizo yemisindo yemvelo yamadoda, uzophelisa abafundi abadidekile ababengalindele ibhulogi yokudla.
Ithiphu # 2: Yiba ne-tezaurus Spremni futhi Thatha Creative!
Hlanganisa lawo mazwi ku -sasausus.com futhi uzothola amagama afana nesidla, i-grub, i-fresh, ilungile, injabulo, i-goodies, ukudla, i-munchies, eqinile, i-hearty, i-veggies, nenjabulo. Engeza amanye alawo mazwi ndawonye (njegokuthi i-munchies ye-vegan ili zokupheka ukudla okufanele) futhi voila, unegama lebhulogi yakho.
Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama-glagoli, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene nawe kanye nokuqukethwe kwakho
Ngomzekelo webhulogi wezokudla, ungangeza izina noma amagama achazayo ahlobene nawe njengebhulogi, okungaba: u-gazda, umfana, intombazane, oqalayo, ukudla, izeluleko, isidlo sasekuseni, isidlo sakusihlwa, isidlo sasekusem, isidlo salus, isidlo salus, isidlo saiskuli, isidlo salus, isidlo saiskuli, isidlo saiskuli, isidlo salem.
Zibeke ndawonye futhi uzothola amagugu afana nokudla okufanelekile kwentombazane, i-veganski bos munchies, ukupnoheka kwekhishi ehlanzekile, noma i-club yokudla enepilo.
Razina I-razine yePro: Ukusebenzisa i-Made-up Riječ noma Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
Ungesabi ukuzama zonke izinhlobo zamagama futhi ujabule ngawo. Otkačite gornje igrice elipholile okungekho owake wacabanga ngalo!
Amasayithi afana I-Wordroid.com iyithuluzi elihle lokuza nenhlanganisela yegama elijabulisayo futhi kulula ngempela ukwenza. Vele ufake igama elihlobene nokuqukethwe kwakho, chofoza inkinobho ye “wordoids”, futhi izokunika uhlu lwamagama ongawasebenzisa.
Khumbula, ayikho imithetho enzima uma ifika ekwenzeni igama. Uma nje uqinisekisa ukuthi ibuyele emuva kokuqukethwe kwakho, ungaba ngukudala njenagoba ufuna!
Yadda egy Dakatar da masu ba da da labari egy shafin yanar gizonku Ahoana no fanaovana bilaogy bebe kokoa?